के हो सफलता ? कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? एक मिनेट भएपनी पढ्नुहोस् - Muldhar Post
के हो सफलता ? कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? एक मिनेट भएपनी पढ्नुहोस्
मूलधार सम्वादाता २०७४, १९ मंसिर मंगलवार 632 पटक हेरिएको
मानौं म स्कुलमा गइरहेछु, स्कुलबाट केही सिक्दैछु । मानौ म युनिभर्सिटीमा पढ्दैछु । युनिभर्सिटीबाट केही सिक्दै आइरहेछु । मलाई कामले युनिभर्सिटीको काम गरिरहेछ । मेरो आविष्कार गर्ने क्रममा मलाई केही पनि थाहा हुँदैन तर आविष्कार गर्ने कोसिस गर्दा–गर्दा सबै कुरा थाहा हुँदै जान्छ । त्यसकारण ज्ञानको स्रोत कर्म हो, काममा डुब्नु हो ।
त्यसकारण मैले काम गरेको होइन । म बुद्धिमान पनि होइन । तिमी पनि बुद्धिमान नभएकोमा चिन्ता नगर मजस्तै काममा डुब्न सिक किनकि मलाई पनि बुद्धिमान नभएकोमा चिन्ता छैन । काम गर्दै गएँ, कामले मलाई बुद्धिमान बनाइदियो । त्यसकारण सफलताको मूल रहस्य भनेको नै काममा डुब्नु हो । काममा डुब्नका लागि आफूलाई मन परेको काम गर्नु प¥यो, मनले खाएको काम गर्नु प¥यो ।
त्यसकारण ठूला मान्छे माने बिग्रेको बच्चा भनिन्छ ।
बच्चा बिग्रियो भने ठूलो मान्छे भयो । त्यसैले कुन काम गर्ने भन्ने त सामान्यतया सानै उमेरदेखि थाहा हुने कुरा हो । मन धेरै ठाउँमा लाग्यो भने धेरै ठाउँमध्ये सबभन्दा सर्वसुलभ जे चीज छ त्यसमा ध्यान लगाए पुग्यो । जस्तै चाल्र्स डार्विनले कुकुर–बिरालोलाई मन पराइरहँदा त्यो त क्षेत्र थिएन । तर त्यसमा प्रेम जोडिसकेपछि त्यो एउटा राम्रो क्षेत्र बन्यो । एउटा कुरा के बुझौं भन्नाले एउटा अर्को सूत्र जुन क्षेत्रमा प्रेम जोडिन्छ, त्यो काम बन्छ । प्रेम जोडेपछि त्यो ज्ञान पनि बन्छ, विज्ञान पनि बन्छ । जसरी उनले कुकुर–बिरालोको अध्ययनमा प्रेम जोडेपछि त्यो क्षेत्र बन्यो, विकासवादको सिद्धान्त निस्कियो, हैन त ?
त्यसैले मैले धेरै पल्ट भनेको छु “भगवानले आएर मलाईं ल बाबु के माग्छस्, माग् भन्नु भयो भने म ‘गु’ माग्छु किनभने ‘गु’ त सबभन्दा काम नलाग्ने चिज ।
त्यो ‘गु’ काठमाडौंको खाल्डो जति प्राप्त गर्ने हो भने खरबपति भइन्छ किनकि त्यसबाट बायो ग्याँस निकाल्नुस्, बायो ग्याँस बेच्नुस्, हैन त ?” कुनै पनि कुरा तपाईंले ठूलो परिमाणमा प्राप्त गर्नु भयो भने त्यो सम्पति बन्छ, चाहे त्यो ‘गु’ नै किन नहोस् । त्यस् तै कुनै पनि विषयको ज्ञान ठूलो परिमाणमा प्राप्त भयो भने पि.एच.डी. भयो, त्यो ज्ञान हुन्छ । वैज्ञानिकहरुले त्यसरी नै आविष्कार गरेका थिए ।